Dowladaha Masar,Imaaraatka iyo Sacuudiga oo Wadamadooda Ka Mamnuucay Telefeshinka Al Jazeera.
Thursday May 25, 2017 - 10:42:30 in Wararka by Super Admin
Khilaaf cusub ayaa soo kala dhaxgalay dowladda Qadar iyo qaar katirsan dowladaha Khaliijka Carabta kaas oo salka ku haaya Ururka Ikhwaanul muslimiin.
Dowlado ay kamid yihii Masar, Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta ayaa ku dhawaaqay in dalalkooda ay ka mamnuuceen daawashada Telefeshinka Afka carabiga ku hadla ee Aljazeera islamarkaana ay xayiraad kusoo rogeen dhammaan baraha Internetka ay ka isticmaalaan aaladaha warbaahinta dowladda Qadar.
War kasoo baxay imaaraatka Carabta ayaa lagu sheegay in wasaaradda isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyada ay mamnuucday dhammaan shabakadaha internet-ka ee taabacsan Aljazeera iyo wakaaladda wararka Qadar kadib markii lagu eedeeyay in ay faafiyeen warar lagu taageerayo waxa loogu yeero ‘Argagaxisada’.
Habeenkii Talaadada ayay kooxo shufto ah waxay jabsadeen baraha internetka ee wakaaladda wararka Qadar ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan QANA waxaana lagu faafiyay war been abuur ah oo loo tiirinayo Hoggaamiyaha Qadar kaasi oo ammaan ujeedinayay dowladda Iiraan islamarkaana taageera siinayay Ururka Ikhwaanul Muslimiin.
Dowladda Masar oo ujanjeerta siyaasadaha Sacuudiga iyo Qadar ayaa iyana qaadday tallaab ay ku mamnuucayso Telefeshinka Aljazeera iyo dhammaan iclaamka xukuumadda Qadar, illaa 21 website oo uu kamid yahay website-ka Al Jazeera ayay masar Mamnuucday waxayna ku eedaysay in ay taageero siinayaan Ururka Ikhwaanul Muslimiin.
Mas’uul u hadlay xukuumadda Qadar ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid jiha wareerin ah isagoo Telefeshino ay maalgeliyaan dowladaha Imaaraatka Carabta iyo Sacuudiga ku eedeeyay faafinta Been loo kasay.
Telefeshinka Aljazeera oo ku hadla luqadaha English-ka iyo Carabiga ayaa noqday Telefeshin saameyn badan ku leh caalamka islaamka iyo reergalbeedka wuxuna Telefeshinkaas faafiyaa warar iyo warbixinno aysan Jeclaysan boqorrada iyo Hoggaamiyaasha madaxa adag ee carbeed taasi oo keentay in ay cadaadis saaraan dowladda Qadar.
Aljazeera oo ay maalgeliso xukuumadda Qadar ayaa lagu xusuustaa taageeradii ay siisay kacdoonadii Guga Carbeed ee ka dhacay dowlado ay kamid yihiin Masar, Tuunis,Liibiya iyo Suuriya.
Dhaqaalaha Sacuudiga oo sii hoobanaya kadib qiima dhaca Batroolka.
Dowladda Sacuudiga oo dilkii Wariye Jamaal Khaashuqji ka fogeysy Bin Salaam iyo kaaliyaashiisa.